पागल कट्ज ...
प्रश्न पागल कट्ज ...
2 वर्ष5महिना पहिले #203 by PAYSON
के कसैलाई प्यानल ड्राइभरहरू र प्लगइनहरू पुन: डाउनलोड गर्न म्याद catz / saitek मा जानुहोस्? मैले खोज्नु भएको भए तापनि "सबैसँग हाँ" भन्नु भएको कुरा हो, चीजहरू त्यहाँ एक पछि लाग्ने सुचारू काम गर्दछ। म शायद बस SPAD हुनु पर्छ तर म सुनेको यो आफ्नै सानो रक्सी छ।
2 वर्ष5महिना पहिले #204 by Gh0stRider203
मैले ईमानदारीपूर्वक कहिल्यै गरेन।
म अमेरिकामा साइटेक x45 छ तर मेरो अन्तिममा मलाई पर्खाल छ>।> EBay मा x55 मा बोली लगाएको तर ठूलो रूपमा बाहिर जाने
2 वर्ष5महिना पहिले #209 by kolijahc
2 वर्ष5महिना पहिले #215 by PAYSON
नमस्ते केडीई, मैले एक्लै एक्स-एक्सएनएमएक्स गरेँ, मैले सोचेँ कि सन्देशहरूले एक क्र्रोसर गरे। सबै मैले स्वामित्व गरेको छ Saitek X-45 HOTAS नियन्त्रण प्रणाली। ती केही हदसम्म "जोडी" हुनुपर्दछ। यदि म सिर्फ एक छड़ी र केहि बटन चाहन्थेँ म मेरो Logitech सर्वोच्चमा जान चाहन्छु, जुन तपाईलाई आवश्यक छ यदि तपाई पायलट एक विमान हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ (जस्तै म) केहि ग्यारह एआई विरुद्ध कुनै लडाइँ गर्छु, तब X-55 (वा 55) "नियन्त्रण प्रणाली" हट HOTAS टिकट हो।
2 वर्ष5महिना पहिले #217 by Gh0stRider203
पहिलो पल्ट, तपाईंको डुप्लिकेट पोस्ट lol हटाइयो म निश्चित छु कि यो जानबूझिएको थिएन किनकि क्षेत्र lol को आसपास कुनै ढिलाइ छैन
मलाई थाहा छैन कि सबै छड़ी संग गए तर म जान्दछु कि मेरो थल खोलिएको थोरै थलो भाग र मेरो हात ह्याण्डलमा तल आएर यो स्न्याप गर्दै।
क्रापी एक थ्रोटलको लागि डिजाइन, यदि तपाईंले मलाई सोध्नुहुन्छ ... मैले केही मेडिकल टेप प्रयोग गरेर एसिभ मरम्मत गर्न व्यवस्थित गरें तर तपाईलाई थाहा छ कि सधैँ सधैँको लागि हुने छैन।
बत्ती बिना, थोरै बेकार छ। एक सेकेंड म छड़ी प्रयोग गर्दै छु, अर्को म यसलाई एक चोटि स्क्वाश गर्न को लागी (एक चीज म सबैभन्दा घृणा गर्दछु बारे मा मेरो अपार्टमेट खराब छ रोशनी हो। मैले शहरलाई बोलाएको छ तर यो स्पष्ट रुपमा केहि राम्रो छैन त्यसैले म मेरो विचार गर्दछु NEXT कल काउन्टी हेल्थ डिटटमा छ)।, मैले यसलाई फिर्ता राखेको छु र यसले काम छोडेको छु। म बस wtf जस्तै हुँ वास्तवमा?
2 वर्ष5महिना पहिले #218 by Gh0stRider203
PAYSON ले लेखे: हाई केसी, मैले X-45 लाई कहिल्यै पारेको छैन, मलाई लाग्छ कि सन्देशहरूले प्रायोजक गरे। सबै मैले स्वामित्व गरेको छ Saitek X-55 HOTAS नियन्त्रण प्रणाली। ती केही हदसम्म "जोडी" हुनुपर्दछ। यदि म सिर्फ एक छड़ी र केहि बटन चाहन्थेँ म मेरो Logitech सर्वोच्चमा जान चाहन्छु, जुन तपाईलाई आवश्यक छ यदि तपाई पायलट एक विमान हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ (जस्तै म) केहि ग्यारह एआई विरुद्ध कुनै लडाइँ गर्छु, तब X-55 (वा 65) "नियन्त्रण प्रणाली" हट HOTAS टिकट हो।
म देख्छु म हवाइजहाजको लागि धेरै हावा छैन, तर म 55 मा सबै प्रकार्यहरूलाई माया गर्छु जबसम्म म प्रायजसो jumbos उड्छु ... म धेरै धेरै बटनको लागि प्रयोग
यसअघि मैले आईएलएसलाई यी दिनहरूमा पुग्छु (म ILS लाई घृणा गर्दछु म अब यो माया गर्छु), म स्वत: सिलोटको लागि एक जोडी सेटअप गर्छु जुन GPS बाट NAV1 र NAV बाट स्विच गर्नको लागि। म एक मात्र कुरा को बारे मा वास्तव मा जब कुंजीपटल को उपयोग को लागि जब म 45 एटीसी संग गर्न को लागि थियो, एपीयू मा / बंद, र शायद 1 या2साना चीजहरु lol
2 वर्ष5महिना पहिले #221 by PAYSON
ठिक छ ! म गलत फोरममा हुनुपर्दछ। धेरैले क्षमा दिन्छन् .gtg